AbaseZimbabwe balondoloza ithambo nophawu lomzabalazo – Bayede News
Inkundla Yabantu Radio
AbaseZimbabwe balondoloza ithambo nophawu lomzabalazo
IZINKULUMO ezahlukahlukene kubantu baseZimbabwe eziqale ukuzwakala
by Bayede-News Posted on 13 September 2019 19 September 2019
Ungene kwanomunyu umkhumbi obuthwele uMugabe Izithombe: nguThemba Hadebe
IZINKULUMO ezahlukahlukene kubantu baseZimbabwe eziqale ukuzwakala ngeledlule kusuka kudlule emhlabeni owayenguMengameli uMnu uRobert Gabriel Mugabe sezishintshile selokhu kufike isidumbu sakhe ngoLwesithathu sisuka eSingapore lapho eshonele khona.
Ngesikhathi imoto ebithwele isidumbu ifika eHarare kubonakale izixuku zisondela ngakuyo kwazwakala izingoma zomzabalazo zeqembu elibusayo iZANU-PF nesililo kumalungu omndeni. Kubantu baseZimbabwe uMugabe uyohlala njalo engubaba wesizwe noma eselandulela leli ngoba nguyena owakwazi ukuwelelisela izwe enkululekweni liphuma ngaphansi kweBritain. Inkonzo yokwamukela isidumbu ibiphethwe ngaBefundisi abakhulu bamahlelo ahlukene, inkulumo yethulwa uMengameli u-Emmerson Mnangagwa.
Kubantu baseZimbabwe nabangaphandle abalandela ipolitiki yakhona, uMugabe noMnangagwa bekuyinkukhu nempaka, kodwa konke lokho angeke wakubona kulezi zinsuku.
UMnangagwa wayeyiSekela likaMengameli uMugabe wamxosha esikhundleni kulandela izinsolo zokuthi ufuna ukumketula. UMnangagwa waziphindiselela ngoLwezi wezi-2017 esebenzisa amasosha ukuketula esikhundleni uMugabe.
Nangesikhathi sokhetho ngonyaka odlule uMugabe wathi angeke abavotele abantu abayizitha zakhe abamkhiphe esikhundleni.
Zonke lezi zinkulumo eziwukugudlana nenzondo ziphenduke umlando njengoba uMnangagwa kunguye owengamele zonke izinhlelo zokufihlwa kukaMugabe ngasohlangothini lukaHulumeni. Ekhuluma enkonzweni yokwamukela isidumbu uthe umlando awubhala ehola iZimbabwe ngesikhathi esinzima akulula ukuba ucishe. “Kubantu baseZimbabwe lesi yisikhathi sokubuyisana nokudlula kokudala sibeke leli thambo eliphambi kwethu ngesizotha,” kusho uMnangagwa. UMugabe uzofihlwa ngasekuqaleni kwesonto elizayo esigodini akhulela kuso iKutama. Phambilini bekunezinkulumo zokuthi uzofihlwa endaweni okubekwa kuyo amaqhawe ezwe.
“Isidumbu sakhe sizoqala ukuvulelwa umphakathi ngeSonto kusihlwa eKutama, bese kuba nenkonzo yomngcwabo yabakhethekile. Lesi kube yisivumelwano somndeni ngokuhlanganyela, kusho umshana wakhe uLeo Mugabe izolo. Noma esethule uMugabe uyokhunjulwa njalo eZimbabwe ngokuqeda umbuso wekoloni yamaNgisi iRhodesia eyayiholwa iqeqebana labamhlophe elalibeka phambili izidingo zabo kuphela, aboHlanga beyizigqila. Ubengagcini nje ngokuhlonishwa ezweni lakhe, nasemazweni abedlelana nawo ubaziwa ngokungahlonizi ekukhulumeni kwakhe. Kuze kwamenela engayizwa indaba yeBritain noNdunankulu bonke bayo ngoba ekholwa wukuthi yiyona eyabambezela intuthuko yaboHlanga kuleliya lizwe.
Kubaholi bamazwe asebekuqinisekisile ukuthi bazohambela umngcwabo wakhe kubalwa uMengameli uCyril Ramaphosa nababephethe ngaphambi kwakhe uMnu uJacob Zuma noMnu uThabo Mbeki, uMengameli waseChina uXi Jinping, owayenguMengameli waseCuba uRaul Castro, owayenguMengameli waseZambia uKenneth Kaunda.
UMnangagwa, uchaze uMugabe “njengomholi wethu womzabalazo owayekumele ukuba umAfrika nendoda eyakha isizwe sethu”. Eminyakeni engama-37 ayihlale esihlalweni izwe liguquke kakhulu kwaba khona okuhle nokubi. Kukhona abathi uMugabe uwubulale ekugcineni umlando wakhe omuhle njengoba abantu bakhona begcwele emazweni angomakhelwane.
Nakuba sekuyophela iminyaka emibili uMugabe akhishwa esikhundleni, isimo eZimbabwe sisesibi okungangokuba imali yakhona yehlelwa amandla, abantu uphethroli kuyaphoqeleka ukuthi bawuthenge eNingizimu Afrika ngoba kwezinye izindawo awutholakali.
UMugabe unconywa ngokubuyisa isithunzi kubantu baseZimbabwe ngokubanika isipho sangunaphakade okuyimfundo.
Ngesikhathi kuzwakala lezi zindaba emazweni amaningi kwadingeka ukuthi iziteshi zemisakazo nezethelevishini zenze izinguquko ezinhlelweni zazo ukuze kukhulunywe ngoMugabe. Lo mholi okuthe noma esebhonga ngenxeba ngoLwezi wezi-2017 abeqembu lakhe iZANU-PF besizwa ngamagumgedlela bemsusa esikhundleni wateleka kwaze kwangenelela abaholi base-Afrika abebesondelene naye bamnxusa ukuba ehle.
Ubeseneminyaka engama-95 ubudala okwenza abe phakathi kwabaholi bamazwe abashone sebeneminyaka eminingi njengoMnu uNelson Mandela owashona eneminyaka engama-95 ngowezi-2013 noDkt uHasting Banda waseMalawi owadlula emhlabeni eseneminyaka engama-99 ngowe-1990. Kusukela kuzwakale lezi zindaba imiyalezo yokuzwelana nomndeni wakwaMugabe nabantu bonke baseZimbabwe ibingena ilakanyana.
Ekuqaleni uMnangagwa wathi “Kuyizindaba ezibuhlungu ukuthi ngimemezela ukudlula emhlabeni kukaBaba weZimbabwe uComrade uRobert Mugabe. Ubeyisithwalandwe senkululeko, ubenguMAfrika owanikela ngempilo yakhe ekufukuleni aboHlanga. Umnikelo wakhe emlandweni wesizwe sethu nezwekazi awusoze wakhohlakala. Sengathi angalala ngokuthula.” Bese kuphele iminyaka uMugabe exonwe ukugula kusuka nangesikhathi esesesiHlalweni. Ubesethathwa njengenye yezinsika e-Afrika ekanye nowayenguMengameli waseZambia uMnu uKenneth Kaunda, nowaseNamibia uMnu uSam Nujoma.
Iqembu eliphikisayo eZimbabwe iMovement for Democratic Change (MDC) liphakathi kwabazili futhi laba phakathi kwabadlulisela imiyalezo yenduduzo likhalisana nomndeni nesizwe.
Imboni yezokwelapha ingenye yezomnotho obanzi
Posted on 18 October 2019 24 October 2019
Usizi kumfundi ongezukubhala umatric
Isigwebo esingesilona ihaba singahlala sinjalo enkantolo
Posted on 18 October 2019 4 November 2019
U-Eskom: Ngesindlebende kwabo nesiyihlongayo
UGigaba wahoxisa umzila weSAA: Ubufakazi
Posted on 1 July 2019 2 July 2019
Nakulokhu kuphumelele isintu
Posted on 24 June 2019 19 November 2019
Posted in Izindaba
© 1996-2019 Igunundu Holdings (Pty) Ltd
Home Delivery Digital Subscription Gift Subscriptions Mobile & Apps Newsletters & Alerts Bayede News Live Reprints & Permissions
Help Reader Representative Advertise News Service & Syndicate Contact Us
In the Community Careers PostPoints Newspaper in Education Today's Paper Igunundu Agency Events